Indawo yokuhlala yeCondo, iTangub City [NETFLIX YAMAHHALA] - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yeCondo, iTangub City [NETFLIX YAMAHHALA]
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDwight
WiFi ifakiwe. Sine-NETFLIX YAMAHHALA igqibelele ukubanda ngenkqubo yomoya othuleyo.
Imizuzu emi-2 ukuhamba ukuya kwi-NMSC
Imizuzu emi-5 ukuya kumbindi wesixeko
Imizuzu emi-5 uqhubela kwizibuko lokuloba
30mins ukuya Hoyohoy viewdeck
Singalungiselela isithuthi sakho, nathi. ;)
Iyunithi iphakathi kosetyenziso oluxubeneyo lwepropathi yezorhwebo kunye neyokuhlala enemo engqongileyo elungelelanisiweyo. Yimizuzu emi-5 kude nesixeko esikhulu esinesikhululo sebhasi esifumaneka lula kwi-NMSC. I-NMSC yimizuzu emi-2 ukusuka kwipropati. Indawo yesnack yasekhaya ijikeleze ipropathi apho abafundi kunye neengcali eziselula zixhoma. Iyunithi yesitudiyo esidibeneyo ifanelekile kubazali abandwendwela abantwana babo abafunda e-NMSC okanye nabani na ongathanda ukufumana ikhaya kude nekhaya.
Sikhuthaza wonke umntu ukuba agcine umgama wokuhlala kwaye anxibelelane kuphela neqamza lakho.